Araka ny nambarany dia ny fampitaovana amin`ity andrim-panjakana vao nijoro ity no tena mahabetsaka ny tetibolan`izy ireo. Miainga amin`ny kajy tsy marina ny fiarahamonim-pirenena satria mihevitra izy ireo fa 11 no isan`ny mpikambana kanefa miisa 44 izany. Nahitsy izy nilaza fa fitsarana vao noforonina io sady tsy miankina amin`ny fitsarana tampony. Midika izany fa mamorona ny fitaovana rehetra ny HCJ ka izany no mahatonga io salan`isa lazaina fa mihoapampana. Tamin` ny fiandohan`ny herinandro lasa teo no nanao fanambarana niaraka ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin`ny ady amin`ny kolikoly ary milaza fa tsy mifanaraka amin`ny fanambarana nataon`ny mpitondra ny tetibola natokana amin`izany, antony nitondrany ny fanazavana toy izao.